“ဘာကိုမှ အလေးအနက်မထားတော့ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ” - Cele Connections
“ဘာကိုမှ အလေးအနက်မထားတော့ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”
Beauty Blogger မလေး ပန်ကိတ်ဒါဒါကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးနဲ့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ သူမရဲ့ အလုပ်လေးတွေကိုလည်း Beauty Blogger အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကာ အောင်မြင်လာတဲ့ ပန်ကိတ်လေးက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သူပါ..။ ပန်ကိတ်လေးက လက်ရှိမှာ Sngle ဘဝနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ရင်း အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေတဲ့သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ပွင်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတတ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေဟာ သူမကို ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုရတဲ့ အချက်လေး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အလှအပ ဆိုင်ရာလေးတွေကို သူမရဲ့ ပေ့ခ်ျကနေ တင်လေ့ရှိပြီး ခံစားချက်လေးတွေကိုတော့ သူမရဲ့ အကောင့်မှာ တင်ကာ ရင်ဖွင့်လေ့ရှိသူပါ..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၂)ရက်နေ့မှာတော့ ပန်ကိတ်လေးက သူမရဲ့ နေထိုင်တဲ့ ပုံစံလေးကို “ပျော်စရာ၊ ရယ်မောစရာ၊ ချစ်စရာ ဟာသ လေးတွေဆို အရမ်းသဘောကျတယ်။ သူများတင်ထားတာဖြစ်ဖြစ် ၊ page တစ်ခုခုကနေဖြစ်ဖြစ် သဘောကျရင် My day တို့မှာ ပြန်တင်တာတွေ ၊ share တာတွေ ၊ post အနေနဲ့ ရေးတာတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်မယ့် ဟာသတွေ ရယ်စရာတွေ ပြောရတာ ကြိုက်တယ်။ လူ့ဘဝကတိုတိုလေးလေနော်။
အရာအားလုံးကို စိတ်ထဲ အလေးအနက်တွေ ထားပြီး နေ့တိုင်းဘယ်သူနေနိုင်လဲ။ ကိုယ်တော့မနေနိုင်ဘူး။ ပျော်ချင်တဲ့အခါပျော်မယ်။ ငိုချင်တဲ့အခါ ငိုချမယ်။ ပြီးတော့ ခွီချင်တဲ့အခါ ခွီမယ်။ Don’t try to understand me. You will never graduate” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ဘာအကြောင်းအရာကိုမှ အလေးအနက်မထားတော့ဘဲ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း နေထိုင်နေတဲ့ သူမရဲ့ Life Style လေးကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးထဲမှာလည်း ပန်ကိတ်လေးလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ သူတွေ ရှိရင်လည်း မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်.။
Source: Ya Min Oo’s Facebook
“ဘာကိုမှ အလေးအနကျမထားတော့ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ဘဝကို ဖွတျသနျးနတေယျဆိုတဲ့ ပနျကိတျဒါဒါ”
Beauty Blogger မလေး ပနျကိတျဒါဒါကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးနဲ့ အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ သူမရဲ့ အလုပျလေးတှကေိုလညျး Beauty Blogger အလုပျကိုလညျး လုပျကိုငျကာ အောငျမွငျလာတဲ့ ပနျကိတျလေးက မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို အမြားဆုံးရရှိထားတဲ့ သူပါ..။ ပနျကိတျလေးက လကျရှိမှာ Sngle ဘဝနဲ့ပြျောရှငျစှာ နထေိုငျရငျး အခြိနျတှကေို ကုနျဆုံးနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျနျော.။
ပှငျပှငျ့လငျးလငျး ပွောဆိုတတျပွီး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနထေိုငျတဲ့ အပွုအမူလေးတှဟော သူမကို ပရိသတျတှကေ အခဈြပိုရတဲ့ အခကျြလေး ဖွဈမယျထငျပါတယျ။ သူမရဲ့ နစေ့ဉျ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ အလှအပ ဆိုငျရာလေးတှကေို သူမရဲ့ ပခြေျ့ကနေ တငျလရှေိ့ပွီး ခံစားခကျြလေးတှကေိုတော့ သူမရဲ့ အကောငျ့မှာ တငျကာ ရငျဖှငျ့လရှေိ့သူပါ..။ ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၂)ရကျနမှေ့ာတော့ ပနျကိတျလေးက သူမရဲ့ နထေိုငျတဲ့ ပုံစံလေးကို “ပြျောစရာ၊ ရယျမောစရာ၊ ခဈြစရာ ဟာသ လေးတှဆေို အရမျးသဘောကတြယျ။ သူမြားတငျထားတာဖွဈဖွဈ ၊ page တဈခုခုကနဖွေဈဖွဈ သဘောကရြငျ My day တို့မှာ ပွနျတငျတာတှေ ၊ share တာတှေ ၊ post အနနေဲ့ ရေးတာတှေ လုပျလရှေိ့တယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး ဘယျသူ့ကိုမှ မထိခိုကျမယျ့ ဟာသတှေ ရယျစရာတှေ ပွောရတာ ကွိုကျတယျ။ လူ့ဘဝကတိုတိုလေးလနေျော။
အရာအားလုံးကို စိတျထဲ အလေးအနကျတှေ ထားပွီး နတေို့ငျးဘယျသူနနေိုငျလဲ။ ကိုယျတော့မနနေိုငျဘူး။ ပြျောခငျြတဲ့အခါပြျောမယျ။ ငိုခငျြတဲ့အခါ ငိုခမြယျ။ ပွီးတော့ ခှီခငျြတဲ့အခါ ခှီမယျ။ Don’t try to understand me. You will never graduate” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ ဘာအကွောငျးအရာကိုမှ အလေးအနကျမထားတော့ဘဲ စိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး နထေိုငျနတေဲ့ သူမရဲ့ Life Style လေးကို ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးထဲမှာလညျး ပနျကိတျလေးလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဘဝကို ဖွတျသနျးနတေဲ့ သူတှေ ရှိရငျလညျး မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနျော.။
ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့သားများကို သူနာပြုလေး သက်သက်နဲ့အတူတူ ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း
” မော်လမြိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူမချစ်တဲ့အခြားမြို့တစ်မြို့ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ”
” အေးမြတ်သူရဲ့အသက်( ၃၄) နှစ်​ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေး အတွက် သတိတရဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားရဝေအောင် “